Mikel Etxebarria anobva kuMK Electrónica: hurukuro yega yeLxA | Linux Vakapindwa muropa
Mikel Etxebarria ndiye munyori wemanyowani pane akavhurika Hardware mapuratifomu senge bhuku Aurdino: tekinoroji mukati memunhu wese anosvika, makosi ekudzidzisa pamagetsi, ma microcontroller uye Arduino, nezvimwe, kuwedzera kune mugadziri we MK Zvemagetsi, saiti iwe yaunogona kuwana zvese kudzidziswa parudzi urwu rwetekinoroji pamwe nemakiti nemidziyo yekudzidzira nekudzidza. Uye ikozvino kuLxA takave nemukana wekumubvunzurudza chete kune yedu blog ...
Chinhu chepamusoro chinofunga nezvekukosha kwerudzi urwu rweyakavhurika michina yemidziyo yekuvandudza kweakawanda mapurojekiti e DIY, uye zvakatonyanya kudaro kana tichifunga kuti mapuratifomu akadai saArduino uye Raspberry Pi ari kushanda seane simba maturusi edzidzo. Kana iwe ukashinga kuziva zvishoma nezvaMikel, mavambo ebasa rake uye zvimwe zvakawanda, ndinokukurudzira kuti uverenge hurukuro yedu:
LinuxAdictos: MK Electrónica akazvarwa sei?
INI: Miguel Etxebarria: Kunyangwe MK Electrónica (MKE) ichangobva kugadzirwa (2018), muchokwadi isu tiri ivo vagari venhaka vakananga vevakarwa Programm Microsystems Engineering (MSE). Nekuda kwedambudziko ratakatambura tese, MSE yakamisa basa rayo gore rapfuura, mu2017. Zvisinei, kamhere kakasara, tumazimbe tudiki izvo zvakatibvumidza isu kuchengeta murazvo uye kunyepedzera kwetekinoroji ichipisa.
Uye ndipo patiri. KuMK Electrónica takanunura zvigadzirwa zveMSE zvine chiratidzo, tinogadzira, tinoshambadza uye tinovapa rutsigiro rwehunyanzvi. Isu tinogovera zvigadzirwa uye zvishongedzo kubva kumakambani edu anomiririrwa uye, sezvo zvisingakwanise kuita neimwe nzira, isu tinoramba tichigadzira zvigadzirwa zvitsva zvedu. Muchokwadi, kusvika parizvino gore rino, isu tatova neayo matsva maviri mukatalog yedu: iyo Micro Lab chikuva uye iyo ArduPIC kadhi rekudzora.
Muchidimbu, isu tinoedza kuenderera mberi uye kuve mukushandira kwevadzidzisi, vadzidzi, vagadziri uye vateveri zvavo.
LxW: Nei didactic zvemagetsi?
ME: Tese isu taive chikamu, pamberi peMSE, uye ikozvino MK Electronics, takave nehukama hwakakura kana hudiki nenyika yedzidzo kwemakumi emakore. Mumazuva iwayo taigara tichifunga kuti izvo zvinhu nemidziyo inodiwa kuvhara zvinoitika mune zvemagetsi / zvemagetsi zvaive zvakaoma, zvakaoma kuwana uye zvinodhura kwazvo. Inodhura chete yenzvimbo, masangano kana makambani, asi kwete yevadzidzi kana mafeni.
Ndiri kurangarira marabhoritari anodhura ekuyedza uye kuita nemagetsi maseketi emagetsi, masisitimu ekuvandudza ekugadzira uye kudhirowa mashandisirwo anoenderana nema microprocessors / ma microcontroller, mutengo wechinhu chipi nechipi kana wedunhu rakabatanidzwa raive zvishoma pane zvakajairwa. iwe wakave nerombo rakaringana kuti uzviwane zvakajeka), iyo yakanyanya mutengo wesoftware maturusi uye macompiler anodikanwa kunyora ako mapurogiramu, nezvimwe. Vaya vakaita seni vano "comb vhudzi bvudzi" vanoziva zvandiri kutaura nezvazvo. Ndiri kutaura nezve makumi ezviuru ekare mapesetas.
Panguva ino kudana kwedu kwagara kuri kwekutungamira zvishandiso zvedu kune mudzidzi uye hobbyist mune zvese, kuyedza kuvapa zvese zviri zviviri Hardware / software maturusi uye zvikamu uye zvishongedzo zvine yakanakisa mhando / mutengo chiyero. Pakupedzisira chinangwa chedu ndechekushamwaridzana nekusimudzira kudzidziswa kwetekinoroji nyowani, kana kuyedza.
LxW: Unozvivandudza iwe chero varairidzi vaunopa muchitoro kana iwo murawo unoitwa kune wechitatu mapato? Kunyangwe iwe watondipindura kare ... asi tsanangura zvishoma kune vaverengi:
ME: Ehe. Kunyangwe isu tichinyatso kupa zvimwe zvinyorwa zvakagadzirwa nevechitatu mapato, tinogona kutaura kuti edu "nyeredzi" zvigadzirwa ndevedu. Izvi zvave zvakadaro kubva pakutanga kweMSE, uye kuMK Electrónica isu tinoramba tichienderera munzira iyi. Yedu Yese Yekudzidzisa elektroniki rabhoritari, iyo PIC's USB-PIC'School murabhoritari, uye Micro'LAB chikuva cheMicrocontroller makadhi, pakati pevamwe, muenzaniso weizvi. Izvo zvishandiso zvakagadzirwa nesu, zvinogadzirwa nesu uye zvinotengeswa nesu. Mune mamwe mazwi, iwo ari 100% edu zvikwata.
LxW: Isu tinoona rutsigiro rwemahara Hardware senge Arduino, asi… Wakamboedza here kana izvozvi uchishandisa GNU / Linux kana chero yemahara software?
ME: Kunyangwe isu tichiuya kubva ku Hardware world uye isu hatisi vagadziri ve software, isu tiri vashandisi uye tinoziva nezvekukosha kwesoftware. Iko hakuna poindi pasina mumwe nemumwe.
Mumamiriro ezvinhu kwandino fambisa vagadziri vehardware pakupedzisira! vakazviona. Kana vachida kutengesa machipisi avo, microprocessors yavo, microcontroller, ndangariro, nezvimwewo, muchidimbu, kana vachida kutengesa "silicon", vanofanirwa kupa zvishandiso zve software izvo zvinobvumidza uye kufambisa kushandiswa kwezvinhu izvi. Uye zvakare, ivo vane hanya zvakanyanya kuti izvi zvishandiso zve software zviyambuka-chikuva uye zvinogona kushanda paWindows, Linux, Mac, nezvimwe.
LxW: Ini ndinonongedza zviri pamusoro, uye ndinoda kuwedzera kuti kuyedza kwakawanda uye kudzosera mainjiniya kwakaitwawo kuti vashande pasi pevatyairi vemahara mune dzakawanda zviitiko, nekuti vagadziri havana kuda kuvhura. Izvo zvakati, ndeupi maonero ako erudzi urwu rwetekinoroji yakavhurika?
ME: Chii chandichaudza iwe !! Mushure mebasa rangu rese rehunyanzvi, kusangana neakavhurika matekinoroji kwave kuri kuropafadza. Ini ndato kutokuudza kuti ini ndinobva kune Hardware. Kugadzira, semuenzaniso, kunyorera kunoenderana nema microcontroller, ini ndoda maturusi esoftware senge mutauro wekuronga uye inoshanda IDE nharaunda inofambisa iyi dhizaini. Kuziva kuti ini ndine aya akavhurika, akawanda, maturusi akavimbika, anopiwa nemugadziri wemike (pakupedzisira!) Uye neshanduro dzakasiyana ... ndinofara kuti ndakazviita.
Kwakave nemazuva apo iwe waifanira kubhadhara kune yakapusa mutauro mutauro, muunganidzi kana zvinosiririsa mushandisi bhuku iro, kune rimwe divi, raiwanzo gara risingapere. Zvandaikuudza: chikomborero ...
LxW: Muchokwadi, muchitoro cheMK unotsigira iyi mhando yehunyanzvi zvakare kubva kudivi rehardware nezvigadzirwa zvakaita seArduino mabhodhi. Hazvina kudaro?
ME: Ehe saizvozvo. Arduino akakwanisa kushamwaridzana uye kuita tekinoroji inokwezva uye inodhura kune wese munhu, chero yavo hupfumi mamiriro uye / kana yavo nhanho yekugadzirira kana ruzivo. Semuenzaniso, ini ndine vatengi vanobva kunyika yeFine Arts. Zvakanaka, vanhu ava vanodya Arduino kana mabhodhi anoenderana. Kuti? Ndakashamisika. Vakanditsanangurira kuti nekutenda kuna Arduino mamwe maitiro avo kana mabasa anogona kuvandudzwa, kuvandudzwa uye kuitwa kunoshamisa, kwepakutanga uye kwakasarudzika, vachiwedzera hunyanzvi kwavari. Zvese izvi pasina kupinda mune akaomesesa ehunyanzvi pfungwa uye pasina kuita yekupedzisira basa kudhura.
Kubva pakuona kwangu, kubudirira kweArduino kunokonzerwa nezvikonzero zvitatu izvo vamwe vagadziri vaisaziva maitiro ekuona muzuva ravo:
Yayo yakaderera mutengo inoita kuti ive inodhura kune angangoita ese mabhajeti.
Iko kusununguka kwekushandisa uye kuronga, nekuda kwayo isu tine chaiyo yeuto revashandisi uye vanogadzira avo vanopa zvisingaverengeke mienzaniso nemaraibhurari, uye kunyangwe akasiyana graphic epurogiramu mitauro. Ehe zvese zvakavhurika uye zvemahara.
Padanho rehardware, tekinoroji yayo yakavhurika inobvumidza kugadzirwa nekuvandudzwa kwemakadhi matsva ekudzora, nhovo, zvishongedzo nezvimwe zvinhu.
Kunyangwe paMK Electrónica isu tiri vaparadzi vari nyore veArduino nemabhodhi anoenderana, isu zvakare tine zvimwe zviitiko zvinovakirwa pavari. Sei usinga tsigire aya akavhurika matekinoroji?
LxW: Chii chako chikuru sosi yemari: DIY? Dzidzo chikamu?
ME: Chii chandingakuudza ... ndinofunga muzvikamu zvakaenzana. Ehezve, zviri pachena kuti iyo Zviitire wega pfungwa iri kuwedzera pakukoshesa kuvhura matekinoroji mune zvese uye Arduino kunyanya. KuMK Electrónica tinopa maturusi, zvinhu uye zvishandiso kune vadiki nevakuru, vadzidzi, vadzidzisi, uye hobbyists mune zvese. Ivo vese "vechokwadi" vanogadzira. Ini ndinofunga inzvimbo inonakidza kwazvo asi inoda kushandirwa pane zvirinani uye zvirinani.
Kana zviri chikamu chedzidzo ... Chinhu chekutanga kutaura ndechekuti dambudziko randanga ndichitaura nezvaro pakutanga rakavabatawo nekucheka mabhajeti. Zviripachena kuti izvi zvinosanganisira kushomeka kwemidziyo mumakirasi, uye / kana kushandiswa kwemidziyo mune yakashata, yechinyakare kana isingashandiswe. Vanofanira kuzvishongedza.
Kune rimwe divi, zvinofanirwa kutaurwa kuti vazhinji vevadzidzisi vehunyanzvi tekinoroji iyi yakavashamisa. Ivo vanomanikidzwa kudzidzisa uye kudzidza nezve dzimwe nzira dzakasiyana uye maturusi anowanikwa pamusika. PaMK Electrónica uye kubva mukuzvininipisa, ndizvo zvatiri.
LxW: Iwe unopawo chikamu chemaindasitiri? Ndokunge, kana iwe ukashandisa microcontroller uye mamwe marudzi emagetsi zvigadzirwa zvemuchina neindasitiri ...
ME: Hongu.Tave nemagetsi kwemakore anodarika makumi matatu nemashanu, saka tinogona kutaura kuti tinoziva chimwe chinhu nezve nyika yezvinhu zvemagetsi. KuMK Electrónica hatigone kuve nehukuru hwezvinhu zviripo. Nekudaro, isu tinobatirana nevamwe vakanaka (kana saka zvinoita kwandiri) vagoveri / vatengesi uye isu tinogona kuwana chero chero chishandiso.
Izvi zviri izvo, mamwe makambani anotibvunza isu zvimwe zvinhu, maseketi, zvishongedzo, nezvimwe. Isu tinoedza kuzviwana uye kudzidza uye nekukurudzira nguva yekuendesa, mashoma huwandu, mutengo, ...
LxW: 3D kudhinda kuri kukurawo uye kuri kuwedzera. Iwe unoronga kuvharawo chikamu ichi nekutengesa kwemaprinta kana zvikamu zvekuvakisa (senge Prusa nevamwe vakavakwa naArduino)?
ME: Zvakanaka, maererano nenhau dzichangoburwa dzandinadzo, zvinoita sekunge kufarira kwekudhinda kwe3D kwakagadzikana, zvirinani munzvimbo yekumba sekuziva kwedu vazhinji. Handizive kana chichava chokwadi kana kwete. Ivo ndeimwe yenyaya idzi dzinopfuura pamberi pako pasina nguva yekuzviongorora. Chandinonyatsoziva ndechekuti iyo chaiyo boom iri kana ichave iri mumaindasitiri 3D kudhinda, chimwe chinhu chinopunyuka vazhinji vedu vanhu venyama. Fungidzira uchikwanisa kubereka chikamu chemuchina wakakuvadzwa uri mumaantipodhi.
Chero zvazvingaitika uye nekupindura mubvunzo wako, chokwadi ndechekuti tasvika kunonoka kune ino chikamu. Mazuva ano kunyangwe munzvimbo huru unogona kuwana 3D purinda uye zvimwe zvishoma zvatinogona kupa.
LxW:… Uye imwe hombe boom: drones? Muchokwadi, iwe uchitova nerekudzidzira uye zvinhu muchitoro zvine chekuita nemarobhoti, zvakanaka, chaizvo nezve microrobotic uye robhoti yekudzidzisa.
ME: Zvakanaka, pamusoro wenyaya yedroni, ndinofanira kutaura chimwe chinhu chakafanana nezvandaikuudza nezve 3D kudhinda. Takanonoka kusvika uye icho chigadzirwa chinomiririrwa zvakakwana muzvitoro zvemarudzi ese.
Kana iri microrobotic, zvirokwazvo, ini ndinotenda kuti tanga tichishanda nemarobhoti ezvekudzidzisa kubvira pakavambwa. Nekudaro, MK ELectronics inopa imwe mhando yeArduino yakavakirwa robhoti, uye isu tinopa zvishongedzo nema sensors emhando dzakasiyana uye zvakajairika chinangwa.
Isu tinopawo dzidziso yekutanga paArduino, Robotic, nezvimwe, ... kuburikidza nemakosi epamhepo anodzidziswa kuVirtual Technological Campus, iyo isu isu kuMK Electronics tinogara tichishandira pamwe.
Zvinoenderana neizvi, kana iwe ukanditendera, ndinoda kutaura maonero angu nezve izvo zviri muMK Electronics isu tinonzwisisa kuti robhoti redzidzo rinofanirwa kuve. Izvo zvinofanirwa kutarisirwa kuti kubva pakuona kwekudzidzira, robhoti inovhara akasiyana maficha senge dhizaini (chassis), mechanics, zvemagetsi uye zvirongwa. Uye ndinotaura izvi nekuti mazuva ano chinenge chero "chinhu" chinofamba chinonzi robhoti. Mune mawonero angu, robhoti rinofanira kusangana nezvimwe zvinodiwa:
Wedzerai: kuti muridzi wayo agone kubvisa kana kuwedzera ma sensors nemaactuator kuti aenderane nharaunda maanofanira kushanda.
Programmable: muridzi wayo anogona kuronga mabasa ayo robhoti anofanira kuita chero nguva yakapihwa. Izvo hazvina kukoshesa nharembozha yekuti kana iwe ukaisa mabhatiri mairi, inofamba kumberi uye painobonderana, inodzokera kumashure isina yakawanda "njere" pachayo chikamu.
Autonomous: robhoti parinorongedzwa, rinofanira kukwanisa kushanda roga munzvimbo yakatenderedza, nekuda kwema sensors ayo uye maactuator. Ichokwadi ndechekuti mota dzinodzorwa kure-kure, ndege uye maherikoputa anga aripo kwenguva yakareba, uye vanodawo kuti uve unoteerera kwavari nekuti kana akasapunzika ...
Mune kit: kana iro robhoti rikapihwa mune kit kuitira kuti muridzi wayo aunganidze zvirinani pane zvirinani. Iye muridzi ndiye achave iye anonyatsomuziva uye achakwanisa kuita mhando dzese dzekugadzirisa uye kugadzirisa pamushini wake. Hazvina kukosha kuenda kuchitoro chekutenga uye kutenga chinhu chekutanga chatinoona "chakagadzirira kuenda." Varipiko zvino "vagadziri" uye DIY?
LxW: Iwe unoshandisa iyo ROS (Robot Inoshanda System) masisitimu mune chero eaya makosi emarobhoti?
ME: Zvakanaka kwete. Zvichida mune ramangwana ... Parizvino robhoti redu rakareruka rakavakirwa papuratifomu yeArduino uye izvo zvinorevei.
Parizvino isu takagutsikana nekupa maturusi uye nekuparadzira tekinoroji kubva pamisimboti yayo, ichiita kuti ive "yakakodzera kumazera ese." Sezvandambotaura, marobhoti edzidzo akakodzera kwazvo kuita kuti sumo iyi ive chinhu chine hushamwari uye chinonakidza.
LxW: Uye ndichichinja nyaya yacho zvishoma, ndinoda kutaura kuti, sekuziva kwako, ndanga ndichishanda nekutsvaga kwemakore gumi nemashanu pachirongwa chaunoziva uye icho ndakakomborerwa kukwanisa kutsikisa. Ndiri kufadzwa nenyika ye microcontroller uye microprocessors, uye wanga uchishanda navo kweanopfuura makore, makore anodarika makumi matatu nemashanu kana ndichirangarira nemazvo. Akavhurawo kosi ne Iyo Yekuchengetedza Sentinel yeGNU / Linux Certification uye ndinoziva nezvekukosha kwekudzidziswa muhunyanzvi hutsva hwazvino neramangwana. Chii chaungati kune vaverengi vanozeza kudzidzisa mundima iyi?
ME: Zvakanaka tarisa ... Chekutanga pane zvese, ini ndaizotaurira munhu wese kuti chakakosha kudzidzisa, mumunda wavanoda zvakanyanya, asi kudzidzisa.
Sezvaunotaura, ndanga ndiri mumagetsi kwemakore anoda kusvika makumi mana. Ndakaita maseketi angu emagetsi ekutanga nemagungano ane… mavhavha emagetsi! Unogona here kufungidzira nzira yandakatora? Kubva pamavhavha ndakaenda kuma semiconductors, ma transistors, kubva pano kuenda kumaseketi akasanganiswa, ndokuzoenda kuma microprocessors uye pakupedzisira kuma microcontroller. Ini ndinogona kuzvirumbidza (kana kwete) nekushanda nemakrofoni anodakadza senge iyo 40, 8080, 8085, iyo R8086, iyo M6502, iyo Z6800 nemamwe andakanyatso kukanganwa, uye ayo aunotaura pabasa rako «Nyika yaBitman«. Nenzira, rakawandisa basa pachikamu chako.
Zvakanaka, ichi chiri chidimbu cherwendo rwangu, ndinofanira kutaura kuti tekinoroji, kuwedzera kune yangu mararamiro, yakandipa nemhando dzese dzekugutsikana (zvakare nguva nenguva kuora mwoyo) uye yakagutsa chikamu chikuru chekuda kwangu. Ini ndinoti chikamu chakakura nekuti ndinoziva kuti handife ndakamugutsa 100%. Ichokwadi ndechekuti matekinoroji matsva anochinja zvakanyanya uye nekukurumidza.
Apa ndipo pane avo vasina kusarudza vane nzvimbo. Nzira yetekinoroji nyowani yakareba, refu kwazvo, haigume, asi zvakare inonakidza uye kutanga kufamba iwe unongofanira kutora nhanho yekutanga. Ini ndakazviita nemavharuvhu emagetsi uye ikozvino nhanho yekutanga inogona kutorwa naArduino, marobhoti, akavhurika mapuratifomu esoftware, GNU / Linux, nezvimwe. Pane mikana isingaperi.
Kune avo vese vanonzwa, kunyangwe kuda kuziva nezvehunyanzvi, ndinokukoka iwe kuti utore nhanho yekutanga. Vachave nenguva yekusiya mugwagwa murefu kana vachida. KuMK Electrónica tine chirevo: «Nakidzwa uye dzidza ...»
Ndatenda chaizvo Mikel !!!
Ndinovimba makafarira iyi hurukuro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » Mikel Etxebarria anobva kuMK Electrónica: hurukuro yega yeLxA